Ireo kavina fihodinana
Ny fehin-tànana sy ny bangle
Fananana & fandefasana & fanaterana
Fampirantiana trano & Fampirantiana
NOHO IZAO FILOHA danymia JEWELRY
Yiwu danymia Jewelry Factory, manokana ny famokarana, ny famolavolana sy ny fandrafetana ny karazan-damba vita amin'ny lamaody, kavina, kavina, peratra ary firavaka firavaka hafa. Iray amin'ireo mpanamboatra firavaka lehibe indrindra isika izay mivarotra mivantana amin'ireo mpivarotra sy mpivarotra manerana izao tontolo izao, ary mifantoka amin'ny creati ...
1. Satrobon-doha: Antsoina hoe haingo izay ampiasaina manodidina ny volo sy sofina, orona ary ny faritra hafa. Ny voafaritra dia azo zaraina ho: (1) akora volo, anisan'izany ny volo, ny volo, volon-doko, satrobon-doha, volon-doha, saron-tava, volon-doko, sns ..., toy ny filana fanjaitra, clip alloy, loko volo miloko ...
INONA NO TOKONY MBOLA INDRINDRA ANAO
Mivalana ny firavaka, vita amin'ny olona manana loko maro samihafa, dia hisy fiantraikany samihafa, tsara tarehy, hatsikana, mafy loha, maloto, izay vokatry ny loko mifanandrify amin'ny lokon'ny firavaka. Ho an'ireo manana volom-bolo miloko mena dia afaka misafidy firavaka miloko marevaka ianao, toy ny firavaka volafotsy miloko, pagpangita ...
Mikarakara ny firavakao
1.Manalavirana ny firavaka tsy ho eo amin'ny gorodona mafy, ny onja ary ny fikapohana dia hanjary haingana kokoa ny lakan'ny farango. 2. Fafohy maloto ny firavakao amin'ny lamba landy. Afaka manampy amin'ny fanesorana ny maloto eo amin'ny lafiny izy ary manala ny takelaka vita amin'ny lela. 3. Afafohy manosika ny firavaka amin'ny alàlan'ny alika tsy ...
adiresy NO.90 ， Chunhan South Road Street Beiyuan Street, Yiwu, Sina